एमसीसी संसदबाट पास हुँदैन: लिलामणि पोखरेल (भिडियोसहित) – Karnalisandesh
एमसीसी संसदबाट पास हुँदैन: लिलामणि पोखरेल (भिडियोसहित)
प्रकाशित मितिः २७ पुष २०७६, आईतवार १७:४४ January 12, 2020
काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोखरेलले अमेरिकी सहायता परियाेजना ‘एमसीसी’ संसदबाट पास नहुने जिकिर गरेका छन्।
आईतबार राजधानीको बागबजार स्थित होटेल हार्दिकमा राष्ट्रिय जागरण मञ्चले आयोजना गरेको ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति, एमसीसी र नेपाल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्ता जिकिर गरेका हुन्।
उनले भने, ‘एमसीसी विबादस्पद र नेपालको हितमा छैन्। नेपाल सरकारका कुनै पनि योजननमा छैन। पञ्चवर्षीय, तीन वर्षीय, विकास प्राराधिकरण, उर्जा मन्त्रालयका कुनै पनि कार्यक्रम र योजनामा समावेश नभएर एमसीसी संसदबाट किन पास गर्ने ? यो पास हुँदैन। यो देशको पक्षमा नभएकाले पास गर्नु हुँदैन।’
अमेरिकी सहयाता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कप्रोरेशन चीनका विरुद्धमा आएको भन्दै उनले कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको प्रयोग कर्ता नेपालले हुन नहुने बताए। उनले भने, ‘हामी सानो छौं, हाम्रो देश सानो छ भनेर हुँदैन। शक्तिशाली राष्ट्रहरुको स्वार्थको लागि प्रयोग हुनु हुँदैन। यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। स्थायी समितिको बैठकमा यस एमसीसीका बारेर गम्भीर छलफल भएको छ।’
उनले अगाडि भने, ‘यस विषयका बारेमा फरक कित्तामा उभ्याउनु पर्ने जरुरी छैन। देशका विपक्षमा भएका कुनै पनि कार्यक्रम वहिष्कार गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीका साथीहरुले इण्डोप्यासिफि स्टाटेजीको एक अंग होईन भनेर एमसीसीलाई संसदबाट पास गराउने कुरा गर्नु भएको थियो। ति साथीहरुको नाम यहाँ लिनै पर्दैन। कसले विरोध गरेका थिए, त्यो भन्नु परेन। त्यो कुरा सबैलाई थाह छ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा नेकपा (क्रान्तिकारी) माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य इन्द्रमोहन सिग्देलले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै सरकारले पास गराए राष्ट्र गम्भीर संकटमा फस्ने चेतावनी दिए।
उनले भने, ‘एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो। नेपालको कानूनभन्दा माथि रहेर आफू अनुकुल हाम्रो देशलाई प्रयोग गर्नु खोज्नु नै अमेरिका गलत मनसायले प्रवेश गर्दैछ भनेर बुझ्न कुनै गाह्रो छैन। आर्थिक अडिट गर्न नपाईने, भारतसँग अनुमति लिनुपर्ने, अनुदान पनि संसदबाट पास गर्नुपर्छ ?’
अर्का वक्ता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अपाध्यक्ष रंगनाथ उपाध्यायले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाति सम्झौता गर्न तयार रहेक भन्दै प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको चर्को आलोचना गरेका छन्।
उनले भने,‘ओली-प्रचण्ड जस्ता धोकेवाज र गणतन्त्रका नव मण्डलेहरुलाई सखाप पार्नुपर्छ। नेपाली जनताले हिजो राणा फाले, राजा फाले अब पालो नक्कली राष्ट्रवादी र दलालहरुको हो। यिनलाई फैलिन दिनुहुँदैन। साइजामा राख्नुपर्छ। केपी ओली र प्रचण्ड दलालहरुका मतियार बनेका छन्। देशलाई बेचेर खान खोज्नेहरुसँग कुनै सम्झौता हुँदैन। राष्ट्रवादी शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ।’
स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक एवं अधिवक्ता स्वागत नेपालले एमसीसीको विरुद्धमा सम्पूर्ण जनताहरु सडकमा आउन आग्रह गरे।
उनले भने,‘यहाँ बहुमतको नाममा राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने? यो अधिकार सरकारलाई छैन। ५१ प्रतिशत मतका साथ एकजना सांसद जितेर आएको छैन। बहुमतको नाममा जनतालाई उल्लुबनाउने ? यदि संसदबाट एमसीसी पास गराउन खोजिन्छ भने गम्भीर खतरा सिर्जना हुन्छ। हामी जस्ता व्यक्तिहरु सडकमा छौं। एमसीसीको विरुद्धमा छौं।’
अधिवक्ता नेपालले अगाडि भने,‘ चारजना व्यक्तिले स्थिति बदल्न सकिन्छ। सचेत वर्गहरु एक ठाउँमा उभिएर भनौं यो सम्झौता गर्नुहुँदैन। यदि हाम्रो आवाजलाई सुनिदैन भने सत्ताका विरुद्ध सडकमा ओर्लिनुपर्छ।’ मञ्चका संयोजक गुणराज लोहनीको सभा अध्यक्षता सम्पन्न भएको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सञ्चालन नरबहादुर कार्कीले गरेका थिए।